Duh Lonak AZ Langhter Mi Hna Le ZaangHlei A Cawi Mi Mingthang Pawl. Uar An Um Bak – Chintanbo
CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT CAAh ZaangHlei A Cawi Mi Mingthang Pawl. Uar An Um Bak
CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT (အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု) မှာ ထပ်မံ ပါဝင်လာကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ အခု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးကို ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ကျနော် ထပ်လောင်း ပြောလိုတာက အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးလည်း ဒီ Civil Disobedience Movement (အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု) မှာ ပါဝင်ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်”လို့ အဆိုတော် အနဂ္ဂက ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် အလုပ်များတွင် ပါဝင်မည် မဟုတ်လို့ ခါရာ ကြေညာ ကျနော်တို့နဲ့အတူ နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ အခုလို Civil Disobedience Movement (အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု) မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၊အနုပညာရှင် မောင်နှမများနှင့် ပါဝင်သူ တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို လေးစား ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့လည်း ဒီ CD Movement လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ တက်အားသရွေ့ ဆက်လက် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် ယခုအချိန်ကစပြီး စစ်အာဏာရှင်များနှင့် ဆက်စပ်တဲ့ မည်သည့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာပေးခြင်း၊ အာဏာရှင်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ထုတ်လုပ်ရေး (သို့) Media များနှင့်လည်း မည်သည့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုမှ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သွားမည် မဟုတ်ပါလို့ ခါရာက ဆိုပါတယ်။
ကျနော်တို့က ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းပါပဲလို့ဆိုတဲ့တိုင်ရွန်း။ကျနော်တို့က ပရိသတ် ထမင်းကို စားထားတာ။ ပရိသတ်တွေ ခံစားနေရသလို ကျနော်ကလည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြည်သူနဲ့ တထပ်တည်း ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ နောက်မှာ အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိတယ်။ လူတယောက် လှုပ်ရှားတာထက် ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားတာက ပိုပြီးထိရောက်နိုင်လို့ အခုလို ပါဝင်ရခြင်းပါလို့ သရုပ်ဆောင် တိုင်ရွန်က ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးမှာ နန်းမွေစံ ပါဝင်လာ။
အဖော်အချွတ် ပုံများကြောင့် ဆမ (ဆေးကုသခွင့်) လိုင်စင် အသိမ်းခံထားရတဲ့ Sexy Model နန်းမွေစံက လက်ရှိ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတမှုကို လိုလားကြောင်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကတဆင့် ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့ပါတယ်။
နန်းမွေစံကတော့ Facebook မှာ Follower ၁.၅ သန်းကျော်တဲ့ Sexy Model တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကလည်း နန်းမွေစံက Civil Disobedience Campaign (အာဏာဖီဆန်ရေး ကမ်ပိန်း) မှာ ပါဝင်ကြောင်း ရေးသားတင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူများနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များစစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူများဟာ ည ၈ နာရီအချိန်တွင် နေအိမ်များ အတွင်းမှ သံပုံးများတီးခြင်း၊ တေးရေး နိုင်မြန်မာ၏ စစ်အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်သည့် ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်း သီဆိုခြင်းတို့ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
အနုပညာရှင်များကလည်း ပြည်သူများနဲ့အတူ တသားတည်း ရပ်တည်ကြောင်း ပြသတဲ့အနေနဲ့ ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းကို သီဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Credit #အနုပညာရှင်များFacebook pag
Biden Administration Nih Kawlram Mipi Sandah Piak Mi Ka Zoh Sawhsawh Ti Lailo A Ti Cang.